Ramzi Yare	 May 25, 2019
Naadiyaasha Qaarada Yurub ayaa si weyn isagu diyaarinaya xilli ciyaareedka soo socda iyadoo durbaba ay isku dayayaan inay heshiisyo la gaaraan xiddigaha ay u baahan yihiin xagaagan. Hadaba waxaan halkaan idiin kugu soo gudbineynaa…
Ramzi Yare	 May 23, 2019
Waxaa furmay suuqa kala iibsiga xagaaga iyada oo ay kooxaha qaarada yurub haatanba bilaabi doonaan sidii ay ugu dhaqaaqi lahaayeen xiddigaha ay doonayaan in ay ku xoojiyaan xilli ciyaareedka dambe. Kooxaha kala duwan ee yurub ayaa…
Ramzi Yare	 May 22, 2019
Waxa si Rasmi ah u furmay suuqa kala iibsiga xagaaga iyada oo ay kooxaha qaarada yurub haatanba bilaabi doonaan sidii ay ugu dhaqaaqi lahaayeen xiddigaha ay doonayaan in ay ku xoojiyaan kooxdooda xilli ciyaareedka dambe. Kooxaha kala duwan…
1- Milkiilaha Naadiga Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ayaa la sheegay inuu la kulmay wakiilada Naadiga Roma iyadoo ay jiraan warar xan ah inuu iibsado naadiga ama inuu share ku yeesho misna Qasnada u jabiyo si u maalgashi ugu samayso…
Kooxda Manchester United ayaa isku diyaarineysa inay jabiso qiimaha ugu sareysa ee suuqa kala iibsiga ee dalka England. Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” Manchester United ayaa diyaar u ah inay bixiso lacagta lagu burburin karo…
Ramzi Yare	 May 15, 2019
Horyaalada Yurub ayaa dhamaan la soo wada gaba gabayn doonaa iyada oo haddaba la soo xiray horyaalka Premier league oo kulamadiisii ugu dambeyay la ciyaaray. Ciyaartoy badan ayaa haddaba la ogyahay in ay qayb ka yihiin suua kala iibsiga…
Real Madrid ayaa ku guulaysatay gool dhaliyaha aadka loo qiimeeyo ee xulka
Badrudiin Mohamed	 May 4, 2019
Real Madrid ayaa ku guulaysatay gool dhaliyaha aadka loo qiimeeyo ee xulka Serbia iyo kooxda Eintracht Frankfurt ee Luka Jovic. Kooxo Badan Oo Yurub ah oo ay Barcelona iyo Chelsea ugu horeeyaan ayay Real Madrid ka hor qaadaysaa saxiixa…
Hordhaca: Frankfurt VS Chelsea – wareega afar dhamaadka tartanka Europa League
Ramzi Yare	 May 2, 2019
Kooxda Frankfurt ee dalka Germany ayaa caawa soo dhawayneso naadiga Chelsea kulanka lugta koowaad ee wareega afar dhamaadka tartanka Europa League. Kooxda Frankfurt waxay dib u soo dhaweyn doontaa Evan Ndicka oo ganaax ku maqanaa, lakiin…
Ramzi Yare	 Apr 28, 2019
Kooxaha qaarada Yurub ayaa bilaabay ka shaqaynta qorshayaashooda suuqa kala iibsiga xagaaga xilli uu xilli ciyaareedku dhamaad ku dhaw yahay. Inkasta oo uuna wax heshiis ah haatan dhici karin oo uuna xiddig-na ku biiri karin koox kale…
Gooldhalinta horyaalada qaarada Yurub ee lagu loolamayo kabta dahabka oo waji cuusb yeeshay
Ramzi Yare	 Apr 22, 2019
Tartanka gool dhalinta horyaalada Qaarada Yurub ee loogu loolamayo kabta dahabka ah ayaa u muuqda mid galay heerkii ugu dambeyay ee abaal marinta Golden Boot-ka lagu kala guulaysan lahaa lakiin tartankan ayaa dib u furmay wuxuuna yeeshay…